Ala ọma jijiji 6.0 meriri Colombia
Home » Njem njem » Ala ọma jijiji 6.0 meriri Colombia
Ala ọmajiji ọhara ruru 6.0 dara Colombia taa, Disemba 24, 2019, na 19:03:52 UTC na-ama jijiji ụlọ na isi obodo, Bogota. Nke a na - eme ka ala ọma jijiji abụọ na - eme na South America n’otu ụbọchị, dịka ala ọma jijiji otu ịdị ukwuu merie Argentina awa ole na ole tupu mgbe ahụ.
Geolọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịdị Ala nke United States kwuru na ala ọma jijiji ahụ dị ihe dị ka otu narị kilomita na ndịda Bogota n'akụkụ obodo Lejanias. Ejiri tụọ ụda 100 dị nso na 5.8 nkeji mgbe e mesịrị.
Ka ịma jijiji site na ala ọma jijiji mbụ nke 6.0 kwusịrị, ụda si na obodo Bogota.
Enweghị akụkọ banyere mbibi ma ọ bụ mmerụ ahụ.
Ala ọmajiji ahụ dị na omimi nke 10 kilomita na nso nke ebe ndị a:
4.8 km (2.9 mi) SSE nke Lejanias
33.4 km (20.7 mi) W nke Granada
40.6 km (25.2 mi) SW nke San Martin
61.3 km (38.0 mi) SSW nke Acacias
83.3 km (51.6 mi) SSW nke Villavicencio
Seychelles Tourism Board Na-eweta Paradaịs Paradaịs na Turkey Fair Trade Fair
Ala ọma jijiji mere na Santiago del Estero, Argentina